सचिवसंग मन्त्री किन भए फायर ? – समावेशी
सचिवसंग मन्त्री किन भए फायर ?
बुधबार, भाद्र २७, २०७५ | २:००:०४ |
काठमाडौं – मन्त्री मात्रिका यादव सचिव यामकुमारी खतिवडाले टेरिनन् भन्दै दर्जनौँपटक बालुवाटार पुगेका छन् । ‘अहिले मिलाएर चलाउनुस्’ भन्नेबाहेक केही उपलब्धी छैन । जननेता मदन भण्डारीका भाञ्जा तथा मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा.डा.धर्मकान्त बाँस्कोटा यामकुमारीका पति ।
यामकुमारीचाहिँ ओखलढुंगा, हर्कपुरदेखिकै कांग्रेस । कतिसम्म भने नेकपाका सांसद यज्ञराज सुनुवार र उनी रामपुरको बरुणेश्वर माविमा सँगै पढ्ने । पञ्चायतकालमै उनीहरुबीच भिडन्त हुन्थ्यो, कांग्रेस–कम्युनिष्टका नाममा । मन्त्री नेकपाका नेता, तर कामचाहिँ कांग्रेस नेताहरुको इशारामा भयो भन्ने मात्रिकाको गुनासो । तर, यति हुँदा पनि सचिव फेरिन्नन् । मात्रिकाको गुनासो छ, ‘नीतिगत कुराहरु निर्णय गर्नुअघि कम्तिमा मलाई त भन्नुपर्छ, देखाउनुपर्छ नि † वास्तै नगर्ने †’ यसरी थुप्रै निर्णय जानकारीबिनै भएपछि मात्रिका फायर हुने नै भए । फलतः उद्योगसँग सम्बन्धित विदेश भ्रमणमा जाँदा यामकुमारीको सट्टा वाणिज्य तथा आपूर्तितर्फका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेलाई लैजाने गरेका छन् ।
मात्रिकासँग प्रशासनिक सल्लाहकार छन्, विश्वप्रकाश शर्मा । उनी केही जिल्लाको सिडिओ चलाई निजामती कितावखाना पनि बुझेका व्यक्ति हुन् । मात्रिका सल्लाहकारले भनेअनुसार चल्ने, सचिव आफ्नै खुशीमा । घरेलु तथा साना उद्योग विकास विभागका महानिर्देशक शत्रुघन पुडासैनी थिए । विभागहरु गाभिने क्रममा फाजिलमा परी मन्त्रालय तानिए । उक्त विभाग उद्योगमा गाभियो । त्यसपछि घरेलुमा बेग्लै महानिर्देशक नचाहिने कारण मन्त्रालय पुगेका उनलाई यामकुमारीले थपक्क कप्र महाशाखाको प्रमुख बनाइन् । यो कुरा मन्त्रीले चालै पाएनन् ।
अहिले फेरि उद्योग विभागमा खालि रहेको महानिर्देशक उनैलाई बनाउन यामकुमारीको जोड थियो । तर, मात्रिकाले मान्दै मानेनन् । उद्योग विभागका महानिर्देशक शिवराम न्यौपाने सरुवा भएर अख्तियार गए । केही दिन उपसचिव कृष्ण खरेलले निमित्त चलाएपछि मन्त्रालयकै सहसचिव विनोद सिंह गएका छन् । यामकुमारीले घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका सुरेन्द्र थापा मगरसँग मिलेर आफ्नो अनुकूलको संगठनात्मक संरचना बनाउन थालेकी छन् । त्यसका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर निर्णय गर्ने भनी क्याबिनेटमा प्रस्ताव पुग्यो । विभागीय मन्त्रीले क्याबिनेटबाट पठाइएको प्रस्ताव हेरेर आफ्नो मन्त्रालयको कुरा थाहा पाउनुप¥यो । प्रस्तावित नयाँ अर्गानोग्राममा दरबन्दी कटौती गरिएको छ, तर, औद्योगिक विकास प्रतिष्ठानको अस्तित्व के हुने ? लगायतका कार्यालय बारे केही भनिएको छैन । यसपछि क्याबिनेटले प्रक्रिया पु¥याएर ल्याउनु भनी फाइल फर्काएको छ । यामकुमारीले नयाँ अर्गानोग्राममा राजनीतिक नियुक्ति नहुने व्यवस्था मिलाएकी छन् ।
मन्त्रालय एउटा छ, सचिव दुई । कर्मचारीका अनेकथरि गुट छन् । सहसचिवबीचमा मन्त्रीको नजिक को हुने ? सचिवको नजिक को हुने भनेर होडबाजी नै चल्छ । रोचक के छ भने, हाकिमहरुको हानाथापले घरेलु तथा साना उद्योग तालिम केन्द्र कता गाभियो भन्ने अहिलेसम्म पत्तो छैन । कोही भन्छन्, स्थानीयमा गयो । कोही भन्छन्, उद्योगमै छ । स्थानीय तहमा त्यस्तो तालिम दिने कर्मचारी छैनन् । रहनुपर्ने चाहिँ उद्योग तथा घरेलु विभागको शाखाको रुपमा हो । तर, अनेकतिरबाट खोज्दा पनि त्यहाँ भेटिन सकेको छैन ।
उता, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) विकास समिति ऐनअन्तर्गत गठन भएको थियो । समितिहरु खारेजीको एकमुष्ट निर्णय सेजमा प्रभावित हुँदा चल्न लागेका कतिपय उद्योगहरु पनि बेहाल छन् । सबभन्दा बिजोग त कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टको छ । उनको दरबन्दी हो, खानी तथा भूगर्भ विभाग । सेवासमूह हो, टेलिकम इञ्जिनियरिङ । लियन पद राखेर राजनीतिक नियुक्ति गरिएको । मान्छे गोरखाका । पद सुरक्षित राख्न दिनदिनै मन्त्री र सचिवकहाँ धाइरहेका छन् ।